Golaha Amaanka Ee Qaramada Midoobay Oo Ka Fal-celisay Dacwad Xukuumadda Somaliland U Gudbisay | #1Araweelo News Network
Golaha Amaanka Ee Qaramada Midoobay Oo Ka Fal-celisay Dacwad Xukuumadda Somaliland U Gudbisay
New York(ANN)-Guddiga Golaha ammaanka ee Qaramadda Midoobay u qaabilsan la socodka cunaqabateynta hubka ee weli saaran Soomaaliya, ayaa eedayn culus u jeediyey dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Guddiga ayaa sheegay in dowladdu ay ku fashilantay inay kala shaqayso howlaha la socodka cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya. Sidoo kale waxa ay ku baaqeen in la xoojiyo cunaqabateynta saaran Soomaaliya, islamarkaana lagu sameeyo dib-u-habayn, si looga hortago hubka sharci darrada ah ee gacanta u gala kooxaha argagixisada, gaar ahaan kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish.
Jonathan Guy Allen oo ka mid ah xubnaha guddiga ee golaha ammaanka warbixinta siiyey, ayaa yidhi, “Cunaqabateynta waxa loo saaray Soomaaliya waxay ahayd in lagu caawiyo ee ma ahayn in wax loogu dhimo, guddiga khubarrada ahna waxaa saaran mas’uuliyad weyn oo la xidhiidha ka hortagga argagixisada. Laakiin waxaannu jecelahay in Soomaaliya sii saarnaaddo cunaqabtaynta hubku.”
Sidoo kale, Somaliland ayaa mar horre farriimo u kala dirtay lammaaha amaanka ee IGAD iyo Qaramadda Midoobay. Wasiirka Warfaafinta Somaliland Maxamed Muuse Diiriya ayaa baaq uu diray u dhignaa Sidan
“Waxaan ogsoonahay in baryahanba dawlada Farmaajo ee fila Somaliya fadhidaa ay isku dayaysay in hub lasiiyo oo waliba ay waydiisatay dalalka Eratariya iyo Turkiga horena ay u soo siiyeen dalal aanan halkan magacayadooda ka sheegayn. ,IGAD iyo dalalka Afrikaba ha ogaadaan inuu hubku mabnuuc ka yahay Somaliya waxii laysku odhan jiray in hub loo soo daayo,ha ogsoonaadaan hubkaas haddii loo soo daayo in Somaliland iyo Geeska Afrikaba uu hubkaasi khatar ku yahay iyo dhibaato aan loo joogin, waxaan leeyahay aduun weynuhu ha ka digtoonaadan, haddii ay isaga u sii daayaana anagana ha noo soo daayaan.”